Kim: “Maskaxda aan fadhiyin” ee Trump oo ahmiyad usii yeeshay nukliyeerka – Idil News
January 28, 2021 | Farmaajo oo la filayo in uu aqbalo Shirka Pl iyo Jl ay ku baaqeen
Kim: “Maskaxda aan fadhiyin” ee Trump oo ahmiyad usii yeeshay nukliyeerka
This undated picture released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on August 4, 2016 shows North Korean leader Kim Jong-Un (C) delivering a speech at the 3rd Meeting of KPA Activists in O Jung Hup-led 7th Regiment Title Movement at the April 25 House of Culture in Pyongyang. / AFP / KCNA / KCNA (Photo credit should read KCNA/AFP/Getty Images)
Posted By: Idil News Staff September 22, 2017
Kim Jong-un ayaa sheegay in maskaxda aan “fadhiyin” ee Trump ay ku qancisay in uu ku saxsan yahay hormarinta hubka dalkiisa Kuuriyada Waqooyi.
War qoraal ah oo naadir ah oo uu warbaahinta sii mariyay ayuu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku sheegay in Trump ay “saamayn wayn” ka soo gaari doonto khudbaddii uu dhawaan ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee Qarammada Midoobay.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa Talaadadii sheegay in haddii Maraykanka lagu qasbo in uu is difaaco uu guud ahaanba burburin doono, Kuuriyada Waqooyi.
Labadan dal ayaa bilihii u dambeeyay is waydaarsanayay dagaal afka ah oo sii kululaanayay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabinaysay gantaallo aan baaxaddooda la sii saadaalinin. Waxayna tijaabisay nukliyeerkii Lixaad, inkastoo cambaarayn caalami ah ay ku mutaysatay arrintaas.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi oo horray khudbadda Trump ugu sheegay “eey ciyay” oo kale ayaa ka digay in dalkiisu uu badwayna Baasifik ku tijaabin doono ban haydarojiin ah, arrintaas oo ay kaga jawaabayaan hanjabaadda madaxweynaha Maraykanka.
Wakaaladda wararka Yonhap ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wasiirka arrimaha dibadda ka soo xigatay in “bamkan uu noqon doono kii ugu awoodda badnaa ee noociisa ah.
Laakiin wuxuu intaa ku daray “in aysan ogayn ficilka ay qaadi doonaan maadaama amarka uu bixin doono hogaamiye Kim Jong-un.”